TTSweet: အန်တီဆွိရဲ့ အိမ်ရှင်မဘ၀ တစ်နေ့စာ အလွဲများ
Posted by T T Sweet at 3:01 PM
မဖတ်ရသေးဘူး comment အရင်ပို့ တယ်
ဖိုးတုတ် February 29, 2012 at 6:09 PM
အ၀တ်လျှော်ရင် တစ်ရှူးတွေ ဘောင်းဘီအိပ်ထဲမှာကျန်ခဲ့မှာပဲစိုးရိမ်တယ်၊ အ၀တ်လှန်းတဲ့ အခါ တစ်ရှူးတွေက အ၀တ်တွေအားလုံးကို ကပ်ကုန်တော့တာပဲ၊
ကွန်မန်.တွေဖတ်ပြီး နေ.လည်နေခင်း မဆွိ တရေးအိပ်လို.ရပြီ။ ZZZZZZZZZ
T T Sweet February 29, 2012 at 6:24 PM
ဟမ်မလေး ဒီနေ့ ကိုဇီ အတော်အားပေးနေပါပေါ့လား။ ကွန့်မန့်၃ခုလုံး သူချည်းပဲ။ အန်တီဆွိ အားငယ်နေမှာစိုးလို့ အားလာပေးတာထင်ပါရဲ့။ ဟိုနေ့ကတောင် ဦးခြိမ့်က ကိုဇီတစ်ယောက် ခုတလော မတွေ့ဘူးပြောနေသေးတယ်။ မှတ်မှတ်ရရ။
တစ်ရှူးတော့ တစ်ခါမှမပါဖူးဘူး။ အ၀တ်လျှော်ရင်တော့ ဘောင်းဘီအိပ်တို့ ဘာတို့ သေချာနှိုက်စစ်ရသေးတယ်။
By the way ZZ နဲ့ zzz နဲ့ တူတူပဲလား အကိုတို့ရေး)
Mrs. Bagel February 29, 2012 at 6:45 PM
နောက်တစ်ခါတော့ ဒီအ၀တ်လျှော်စက် ဓာတ်မီးနှင့်ပါ ထိုးစစ်ရပါတော့မည် <<hee hee :D
ဆွေလေးမွန် February 29, 2012 at 7:07 PM
လက်ညှိုးအပြတ် အသားစလေး ဘယ်သူ့ထဲ ပါသွားပြီလဲလို့ ..တော်သေးမပါလို့ ..:P
အ၀တ်လျှော်စက်အကြောင်းကတော့ အန်တီဆွီနဲ့ အဖွဲ့ဝင် member လုပ်ရင်ကောင်းမယ်
အိမ်မှာလဲ ဒီိလိုပဲ အင်ကျီအသစ်တွေ ခဏခဏလွှတ်ပစ်ရတယ်.
မီးပူတိုက်တာ ကျွမ်းသွားလို့ ကတစ်မျိုး အရောင်စွန်းသွားလို့ တစ်ဖုံနဲ့ လေ..
မြသွေးနီ February 29, 2012 at 8:27 PM
ဘလော့ဂါပီပိ လက်ဓားရှတာတောင် ဓာတ်ပုံရိုက်ယူနိုင်တာ မအံ့သြတော့ပါဘူး။ ဒါမှ ဘလော့ဂါ..လို့ ကြိတ် အားပေးလိုက်တယ်။ ရှမ်းခေါက်ဆွဲလေးစားကောင်းတာ လက်က အသားဖတ်လေးများ ပန်းကန်ထဲ အရည်ပျော် ပါသွားလေသလား...? အ၀တ်ကောင်းတွေ လက်နှီးစုတ်နဲ့ ရောလျှော်မိတာနားရောက်တော့ ရယ်မိတယ်..။ ဖြစ်ရလေ အစ်မဆွိ...။
ွှTTSweet ရေ အဝတ်လျော်စက် ကတော. တခါတလေ
အဲလိုပဲနော် ဘယ်လိုများ အဝတ်တွေ ကြားကပ်နေတယ်မသိ
တခါတခါ ခြေအိတ်လျော်မှာမို. သေချားကြည်.တယ်
ဘာမှမတွေ.ဘူး အဲလျော်ပြီးလှမ်းမယ်ဆိုမှ တခြားဟာတွေပါ
T T Sweet February 29, 2012 at 10:56 PM
ခြေအိပ်နဲ့လဲ ရောလျှော်ဖူးတယ်။ front loading တွေ အဆိုးဆုံးပေါ့။ ဒလက်လေးတွေမှာ ကပ်ကျန်နေတာ။ ဟုတ်တယ် ခြေအိပ်တွေ လှမ်းမယ်ဆိုမှ ထွက်လာတာ။ တစ်ခါတစ်လေ ဘော်လီတွေတောင်ပါသေး ဟေးဟေး။
ဖိုးတုတ် February 29, 2012 at 11:34 PM
ဖိုးတုတ် February 29, 2012 at 11:44 PM
ကျွန်တော့် ZZZ ကပရိုဖိုင်းဓါတ်ပုံပါပါတယ်၊ ကျွန်တော့်သားဆွဲထားတဲ့ ပန်းချီကားချပ်လေးပါ၊ (ကြေညာဝင်သွား)
အ၀တ်စုတ် အလွဲကို ဖတ်ပြီးတော့ ဟားဟား..ဟားဟား နဲ့တောင် မရယ်နိုင်ပါဘူး...
အူတက်ပြီးတော့ အသံကို မထွက်တော့တာ...
Evy March 1, 2012 at 1:45 AM
တီဆွိရေးတာ သိပ်ဖတ်လို့ကောင်းတာပဲ။ စလုံးက ဓါးအကြောင်းမှတ်မိသေးတယ်။ လက်နှီးစုတ်ဇတ်လမ်းဖတ်ပြီး ရယ်လိုက်ရတာ
လက်ဓါးထိတာဖတ်တော့ အူယားတယ်။ အ၀တ်လျှော်တာ ဖတ်ရတော့ အူတက်တယ်။ အ၀တ်လျှော်စက်နဲ့ လျှော်ရင် ကျနော်လဲ ခြေအိတ်တွေ တအားပျောက်တယ်။
ပို့စ် တက်တက်ချင်း ဓားကြီးမြင်လိုက်တော့ လန့်တောင်သွားတယ်
Vista March 1, 2012 at 7:59 PM
အသားဖတ်လေးပါလို့ များပိုစားကောင်းသလား ဟိ
တီဆွိရေ... လက် ဓားရှတဲ့ ပို.စ်လေးကိုဖတ်ပြီးတော့ မရီနိုင်ဘူး။ အိမ်ရှင်မတစ်ယောက်ရဲ. ဘ၀ကို နားလည်လို.။ ငယ်ငယ်တုန်းက မိဘအိမ်မှာ လက် ဓားရှလို. သွေးလေးနည်းနည်းထွက်တာကို မူးမေ့လဲကျခဲ့ဘူးတယ်။ ကိုယ်တိုင် အိမ်ရှင်မဖြစ်လာတော့ ချက်ရင်းပြုတ်ရင်းတန်းလန်း ဓားရှလည်း ရေလေးဆေး၊ ပလာစတာလေးအုပ်ပြီး ချက်ရတာပဲ။ မဟုတ်ရင် ချက်ပြုတ်ဖို. ပြင်ဆင်ထားတာတွေ တန်းလန်းကို ပြန်သိမ်းရ ဆေးရမှာနဲ. မထူးလို.။
ဟိုတလောကပဲ မနက်အိပ်ယာထတော့ လူကတော်တော်နေလို. မကောင်းဘူး။ ဒါပေမယ့် ညနေ ဧည့်သည်တွေ ထမင်းကျွေးမယ်ဆိုပြီး ဖိတ်ထားတော့ လုပ်ရတာပေါ့နော်။ ယောက်ျားကလည်း အလုပ်သွားနေတယ်။ ချက်နေရင်း ချက်နေရင်းနဲ. ဘယ်လိုမှ မဟန်နိုင်တော့လို. ချက်ရင်းတန်းလန်းတွေ အကုန်ပစ်ထားခဲ့၊ မီးဖိုထဲဝင်ရင် ၀တ်တဲ့အကျီနဲ.ပဲ အိပ်ယာပေါ်သွားခွေနေတာ ယောကျာ်းပြန်လာလို. အဖျားတိုင်းတော့ အဖျား ၁၀၄။ ဒါနဲ. ဆေးသောက် နည်းနည်းသက်သာလာတော့ မီးဖိုထဲပြန်ဝင်၊ လူ ၁၀ယောက်စာပြန်ချက်။ သူကတော့ပြောပါတယ် ဧည့်သည်တွေကို ထမင်းစားဖိတ်ထားတာ ဖျက်လိုက်ဖို.။ အားနာလို. မဖျက်ခဲ့မိဘူး။ အိမ်ရှင်မဆိုတာ ဒီလိုပါလားလို.ပဲ မှတ်လိုက်မိပါတယ် အန်တီဆွိရေ...။
Shinlay March 2, 2012 at 1:34 AM
San San Htun March 2, 2012 at 3:30 PM
ဒီမှာလည်း အဝတ်လျှော်ပြီးတိုင်း၊ အခြောက်ခံစက်ထဲက ထုတ်တိုင်း တီတီဆွိပြောသလို ဓာတ်မီးထိုးပြီး ရှာရမယ်..ကြယ်သီးတွေ ပြုတ်ကျန်နေတတ်လို့ ..:)
တီဆွိ..ဖတ်ပြီး ရီရတယ်..မေမေ ဆို အဖေ ဓါးသွေးပြီးတိုင်း လက်ရှတာကိုလဲ သတိရတယ်....ပိုစ့်အသစ်မျှော်နေတုန်း ပျော်သွားတယ်..ဖတ်ရင်းနဲ့ မျက်စိထဲမှာ ပုံတွေမြင်ယောင်နေတယ်..
Regina March 3, 2012 at 10:28 AM
မမိုး March 3, 2012 at 11:21 PM
့ဖြစ်ရလေ တီဆွိရယ်...လက်က အခုရော ဘယ်လိုနေသေးလဲ။
Unknown March 6, 2012 at 7:54 PM
ama post ka tot always lu si pae :D
ya... really blogger (like above comments)... during the time u have pain, u still can shoot picture... that is called Blogger :D
everyone has daily life but if u do not have talent of writing, that article of daly life could not able to attract reader..
but for u, u haveatalent...